FIAKARAN’NY SARAN-DALANA : Mamono afo ny eo anivon’ny ATT | NewsMada
« Hentitra ny fanaraha-maso ireo mampiakatra saran-dalana », hoy ny talen’ny ATT.
Taorian’ny fiakaran’ny vidin-tsolika sy ny fiakaran’ny saran-dalana, mitady hevitra maro hamonoana afo ny ATT. Tsy misy fanapahan-kevitra matotra fa mandeha ila ny fandraisana andraikitra avy amin’izy ireo….
Efa niakatra ny saran-dàlana vao nipoitra indray ny teo anivon’ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety (ATT). Ny efa malama tamin’ny filan-kevitry ny governemanta no naverin’ny talen’ity antokon-draharaha ity nopasohana tamin’izany. Araka ny fantatra, efa nilaza ny teo anivon’ny UCTU fa hampiakatra ny saran-dalana manomboka ny voalohan’ny volana febroary, saingy tsy nisy fanazavana mazava na teo anivon’ny governemanta na ny teo anivon’ny ATT. Amin’izao anefa, nahazo toky ny kolonely Rakotondrazaka Andry, talen’ny ATT, ka niresaka tamin’ny mpanao gazety namerina ny zavatra efa voalazan’ny filan-kevitry ny governemanta fa izay mandray fanampiana dia tsy tokony hampiakatra saran-dalana ho 500ariary intsony. Raha tsiahivina, vao nandrangaranga ny hampiakatra saran-dalana ny teo anivon’ny UCTU dia nandrahona ankolaka azy ireo ny teo anivon’ny ATT. Io fandrahonana io izay nanitsian’ny talen’ny UCTU ny fomba fiasan’izy ireo. « Fanelanelanana eo amin’ny kaoperativa sy ny fanjakana no asan’ny ATT fa tsy manome sazy », hoy ny nambaran’Andriantsolomora Bernardin, filohan’ny UCTU, tamin’izay fotoana izay.
Ny mampalahelo, amin’izao raharaha izao, rehefa tonga ny fiakaran’ny saran-dalana vao misy ny fandraisana andraikitra mazava ataon’ity antokon-draharaha ity. Atahorana ho hetsika vonjy tavan’andro, miendrika famonoana afo izao tontosain’izy ireo, amin’ny fidinana ifotony eny anivon’ireo taksibe miasa. Miseholany ny fanaovana mizana tsindrin’ila amin’izao olan’ny fitaterana eto an-drenivohitra izao. Maro amin’ireo taksibe no tsy manaja ny bokin’andraikitra, misy ny mihodina eny amin’ny antsasa-dalana rehefa hariva ny andro. Aiza no fandraisana andraikitra mazava momba ny ATT. Nampitahainy amin’ny resaka mofogasy ny raharaha. « Raha misy mofogasy mahamay sy mangatsiaka, tsy ny mahamay ve no tsofina hangatsiaka », hoy ny talen’ny ATT. Midika izany, fa hanao izay hampangatsiaka ny raharaha fotsiny no tanjon’ity Antokon-draharaha ity fa tsy hitondra ny vahaolana lavitra ezaka. Tsy anavahana ny fanaraha-maso fa tsy ireo mampiakatra saran-dalana ihany asiana fanaraha-maso.